China UM-80 / C / T _ 8 anụ ọhịa USB Monitor Manufacturer and Supplier | Lilliput Nwere
UM-80 / C / T _ 8 inch USB Nyochaa
Nke a bụ ezigbo ngwaọrụ maka azụmaahịa gị yana iji onwe gị mee ihe ebe ọ bụla. Oukwesighi ụdọ ike ọdịnala na eriri VGA, nke ahụ bụ Otu eriri USB.
Innovation USB-only connection-tinye ihe nlere na-agbakwunye agbakwunye!
An USB Kwadoro Touch Screen Monitor dị ka nke abụọ ma ọ bụ sub-monitor maka dị iche iche ngwa na azụmahịa, ntụrụndụ, na-elekọta mmadụ media na kwa ụbọchị ndụ, wdg Jiri gị pụrụ ichetụ n'echiche iji zuru ezu iji ya.
Nlereanya: UM-80 / C / T
Ogwe aka: 4-Waya Resistive
Ngosipụta: 8 inch, 800 × 600 ， 250nit
Mara: UM80 / C na-enweghị ọrụ mmetụ,
UM80 / C / T na ọrụ aka.
Ihe Nleba Anya Igwe eji enyere USB aka ka ihe ntanye / ntaneti maka otutu Video Conference, Izi ozi ozigbo, Ozi, ngwa Office, Egwuregwu map ma ọ bụ igbe igbe, Foto Foto na Nkedo Ngwaahịa, wdg.
Mbido menu maka Mkpebi ihuenyo, Agba, Ntugharị na Mgbatị, wdg
Nyochaa ọkwọ ụgbọala na-akwado OS: Windows 2000 SP4 / XP SP2 / Vista 32bit / Win7 32bit
UM-80 / C / T nwere ọtụtụ puku ngwa bara uru ma na-atọ ụtọ: debe isi ihe ngosi gị n'efu, kwụpụ windo Izipu ozi gị ozugbo, debe mpempe akwụkwọ gị na ya, jiri ya dị ka eserese eserese dijitalụ, dị ka ihe ngosi ngwaahịa akara aka raara onwe ya nye, tinye map gị na ya.
UM-80 / C / T dị mma maka ojiji na obere laptọọpụ ma ọ bụ netbook n'ihi ịdị arọ ya na otu njikọ USB, ọ nwere ike iji laptọọpụ gị mee njem, enweghị ike brik chọrọ!
esonye n'ime usoro nzụta ma ọ bụ usoro ndebanye aha iji nweta ọtụtụ ndị ahịa / ndị ahịa debanye aha, tinye ozi ma nyochaa Jiri otu kọmputa maka ọtụtụ ndị ọrụ (yana sọftụwia ngwanrọ - agunyeghi);
Previous: UM-72 / C / T _ 7 inch USB Nyochaa na ọkà okwu
Osote: UM-82 / C / T _ 8 inch USB Monitor na ọkà okwu
Ogwe aka 4-Waya Resistive
Nha 8 ”
Mkpebi 800 x 480
Akụkụ ruru 4: 3
Nlele Angle 140 ° / 120 Celsius (H / V)
Ike ọrụ ≤4.5W
DC Na DC 5V （USB）
Akụkụ (LWD) 200 × 156 × 25mm
Ibu ibu 536g
Lilliput Monitor , USB Powered Monitor , Lilliput , Sdi Cctv Monitor , agbasa ozi n'ikuku , 5 Inch 4k Camera Nyochaa ,